Trump oo Xi ugu baaqay “in uu dadaal badan galiyo” arrinta Kuuriyada Waqooyi. – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Trump oo Xi ugu baaqay “in uu dadaal badan galiyo” arrinta Kuuriyada Waqooyi.
Laakiin Aqalka Cad ayaa saxafiyiinta u sheegay “in uu Twitterka ku soo qori karo waxkasta oo uu rabo”.
← Tirada dumarka xabsiyada la dhigo ee dunida oo aad sare ugu kacday.
Trump muxuu ilaa iyo hadda ka qabtay Aasiya?. →